आखिर कसरि चम्किन्छ भाग्य ? किन टिक्दैन तपाईको हातमा पैसा ? हेर्नुहोस अघोर बाबाको उत्तर (भिडियो सहित)::Nepal's Online News Portal
मङ्ल, जेष्ठ २१, २०७६
पछिल्लो समय मानिस भित्र भित्रै विचालित छन् अनि मन अशान्ति छ । अनेक किसिमको प्रतिस्पर्धा र दौडले मानिस आफैमा थकित बनिरहेको छ । कोही मानिस भाग्यमा विश्वास गर्छन्, कोही कर्ममा तर कत्तिको भने हातमा पैसा टिकेन भनेर निराश व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । आखिर वास्तविक सुख तथा शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने त रु के भाग्यमानीको भूतै कमारो भन्ने उखान सत्य हो रु के ग्रह दशाका कारण तपाई हातमा पैसा टिक्दैन रु के भन्छन् त लामो समय अध्यात्मा बिताएका यी अघोर बाबा रु हेर्नुहोस् यो भिडियो‘
चक्र साउद आर.सी.काठमाडौं(नेपाली गीत संगीतमा नयाँ नया गीतहरु सार्बजनिक हुने क्रम निरन्तर जारी छ । यसै अबसरमा निकै मौलिक गीत टिपिकल भाका”पिरथिको जाल”(चैर मुसी चैर) भर्खर मात्र सार्बजनिक भएको छ । नेपालि लोकदोहोरी क्षेत्रकि...